Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Jiri Ozi Olileanya rịgoro n'Ugwu Kilimanjaro
Njem njem • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Afọ iri isii gara aga, onye bụbu onye agha ndị agha Tanzania, Late Alexander Nyirenda, gbagoro n'Ugwu Kilimanjaro wee wuo Tanzania "Freedom Torch" a ma ama n'elu ugwu kpụkọrọ akpụkọ iji mee ka udo, ịhụnanya na nkwanye ùgwù dịrị ndị Africa.
A na -ahazi mmemme yiri nke a iji dọta ndị mmadụ n'ofe Tanzania, Africa na ụwa ndị ọzọ.
Ihe omume a ga-eme njem wee merie oke ugwu kpuchiri elu ugwu Kilimanjaro na mbido Disemba nke afọ a-2021.
Nke a ga -adabara na ịka akara afọ iri isii nke nnwere onwe Tanzania n'ụzọ ga -eme mgbanwe.
Ndị na-arịgo elu oge a ga-eziga ozi olileanya site na “Oke ụlọ Africa” na Tanzania na mba ndị ọzọ dị n'Africa dị nchebe maka njem n'oge a mgbe ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na kọntinent niile.
Mgbe Tanzania gbanyere ọkụ “Freedom Torch” a ma ama na elu Ugwu Kilimanjaro Afọ iri isii gara aga, ọ pụtara na ọ pụtara ịchafe n'oke ala wee weta olileanya maka Afrịka niile ebe enwere nkụda mmụọ, hụ ebe iro dị, na ịkwanyere ugwu ebe ịkpọasị dị.
Mana maka afọ a, ndị na -arịgo elu nke Ugwu Kilimanjaro ga -eziga ozi olileanya na Tanzania bụ ebe nchekwa maka ndị ọbịa yana Africa dịkwa nchebe maka njem mgbe ọtụtụ gọọmentị na kọntinent a mere ihe dị iche iche iji gbochie ọrịa ahụ. .
Mgbasa ozi iji dọta ndị mmadụ sitere n'akụkụ dị iche iche nke Afrịka na ụwa iji merie ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke Africa bụ akụkụ nke mmemme iji mee akara afọ 60 nke nnwere onwe Tanzania na Disemba 9 nke afọ a, ebe ụwa ji nwayọọ nwayọọ na -apụta site na mmetụta nke. Ọgbaghara covid19.
Ogige Ntụrụndụ Tanzania, onye na -elekọta nchekwa Kilimanjaro Mountain, na -arụkọ ọrụ ọnụ ugbu a na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na -eme njem nlegharị anya iji dọta ndị mmadụ iji mee ememme afọ iri isii nke Tanzania n'elu ụlọ Africa.
A na -echekwa usoro nchekwa, ndị njem na -akpọkọta ndị ha hụrụ n'anya na ebe pụrụ iche nke mkpụrụ obi ha chọrọ ijikọ.
N'ikuku n'ikuku ruo ọtụtụ ụbọchị, Ugwu Kilimanjaro, nke kachasị elu n'Africa, bụ ebe ezumike pụrụ iche nke ndị njem nlegharị anya na Tanzania, na -adọta ihe dị ka ndị na -arị ugwu 60,000 kwa afọ.
Ugwu a na-anọchite anya onyonyo Afrịka zuru ụwa ọnụ, na nnukwu cone ya nke nwere ọmarịcha snow kpuchiri ya na Africa.
N'ụwa niile, ihe ịma aka nke ịmụ maka, ịgagharị, na ịrị ugwu a dị omimi ewerela echiche nke ndị mmadụ n'ụwa niile. Nye ọtụtụ ndị, ohere ịrị ugwu a bụ ihe egwuregwu nke ndụ ha niile.
Na 1961, e buliri ọkọlọtọ nke Tanzania ọhụrụ nwere onwe ya n'ugwu ka e fewe ya n'elu oke ọcha ya. A mụnyere ọwa nnwere onwe na ọnụ ọgụgụ kacha elu iji wee mee mkpọsa maka ịdị n'otu, nnwere onwe, na otu.
Ugwu Kilimanjaro ka bụ akara na nganga nke East Africa site na njem nlegharị anya ya. Edepụtala ugwu a kacha elu na Afrịka n'etiti ebe ndị njem nlegharị anya 28 n'ụwa kwesiri ka ọ bụrụ ihe nkiri ndụ.
Ndị ọbịa na -enweghị ike ịrịgo elu ya nwere ike ịnụ ụtọ ilele ịma mma ya site n'obodo nta ebe ha nwere ike see foto nke ugwu a dị n'otu.
Chris Lyle ekwu, sị:
September 16, 2021 na 01: 34
Daalụ maka nnukwu akụkọ ahụ, na -eweghachite ncheta dị ukwuu. Mụ onwe m nọkwa na Kilimanjaro na ụbọchị ncheta nnwere onwe Tanganyikan a na -agaghị echefu echefu afọ 60 gara aga, ebe m rutere na ndịda ụlọ akwụkwọ na Nairobi. Na nloghachi, mmiri juputara na mmiri dị na Namanga, a na -elekwa anyị anya na anyị na -ebufe Jomo Kenyatta ka a na -ebufe ụgbọ ala n'akụkụ Tanganyikan gaa na nke dị n'akụkụ Kenya. Mgbe mmiri dara n'echi ya, anyị nwere ike imeri onwe anyị n'ofe osimiri. Ọ ga -amasị m ịkekọrịta ihe ncheta ọzọ ma ọ bụrụ na enwere mmasị.